अर्थ Archives - सबैको समाचार
काठमाडौँ, ८ चैत : एनएमबि बैंकले प्रदेश नं. २ का उखु किसानहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएको छ । बैंकले कृषि तथा उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमीकतामा राख्दै प्रदेश नं. २ मा हालसम्म १५६ जना उखु किसानहरुलाई कलैया र गोलबजार शाखाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराईसकेको छ । बैंकले उखु किसानहरुलाई सहज रुपमा कर्जा प्रवाह गर्ने उदेश्यले रिलायन्स सुगर […]
काठमाडौं, २ चैत : नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ फेरि बढाएको छ।भारतीय आयल कर्पोरेसनले मूल्य बढाएर पठाएको भन्दै नेपाल आयल निगमले बुधबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको हो। निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको भाउ प्रतिलिटर ५ रूपैयाँले बढाएको छ।बढेको मूल्यअनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल प्रतिलिटर १५५ रूपैयाँ […]
काठमाडौं,२३ फागुन : रुस र युक्रेनबीचको त ना वले नेपालमा खाने तेलको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । स्थानीय बजारमा विशेष गरेर सन्फ्लावर (सूर्यमुखी) र सोयाबिन (भटमास्) तेलको मूल्य पछिल्लो एक सातामा ह्वात्तै बढेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको कारण पनि तेल उद्योगीले मूल्य बढाएका हुन् । […]
साताको पहिलो दिन आज सुनको मूल्य २ हजारले बढेको छ। २ हजारले बढेर सुन आज एक लाख १ हजार ९ सय पुगेको छ। शुक्रबार ९९ हजार ९ सयमा कारोबार भएको थियो। तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख १ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघले जनाएको छ। […]
काठमाडौं, १६ फागुन: पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई शेयर निष्कासनको तयारी गरेको छ । सरकारले प्राधिकरणको दोस्रो वित्तीय पुनःसंरचना गर्ने योजनाअन्तर्गत शेयर निष्कासनका लागि सहमति दिइसकेकाले त्यसअनुसार सर्वसाधारणलाई शेयर निष्कासनको तयारी गरिएको हो । प्राधिकरण विद्युत् व्यापार, उत्पादन, वितरण तथा प्रसारण गर्दै आएको सरकारी कम्पनी हो । अब त्यसमा […]
एक लाख रुपैयाँनजिक पुगेको सुनको मूल्य घट्न थालेको छ । बिहीबार प्रतितोला ९९ हजार रुपैयाँ रहेको सुन शुक्रबार १ हजार घटेको थियो । आइतबार १ हजार ४ सय घटेर प्रतितोला ९६ हजार ६ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा केही कमी आएकाले नेपालमा पनि घटेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको […]
सुन र चाँदीको मूल्य वृद्धि‚ आज कतिमा हुँदैछ कारोबार?
काठमाडौं : नेपाली सुनचाँदी बजारमा मंगलवार सुन र चाँदीको मूल्य बढेको छ। सुनको मूल्य प्रतितोला ८०० र चाँदी १५ रुपैयाँ बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९७ हजार तोकिएको छ। अघिल्लो दिन प्रतितोला ९६ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार थियो। यस्तै‚ तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ९६ […]
काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ । आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल डिजेल र मट्टितेलमा ३ रुपैयाँ वृद्धि गरेको हो । नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोलको मूल्य १ सय ४५ कायम गरिएको छ भने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १२८ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । ग्यासमा घाटा […]
काठमाडौं, ४ फागुन : अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएकाे नेपाल आयल निगम लिमिटेडले जनाएकाे छ। निगमले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी कच्चा तेलको मूल्य झण्डै अमेरिकी डलर ९० देखि ९६ प्रति व्यारेल पुगिसकेको अवस्थामा इण्डियन आयल कर्पोरेशनले आज नयाँ मूल्य पठाएको जानकारी दिएको हो। नयाँ मूल्य अनुसार प्रति लिटर पेट्रोल […]
काठमाडौं, १७ माघ : सरकारले दूधको मूल्य बढाएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किसानका लागि दूधको समर्थन मूल्यमा ६.५२ रूपैयाँ बढाउँदै प्रतिलिटर ५६.०४ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघि कच्चा दूधको मूल्य प्रतिलिटर ४९.५२ रुपैयाँ थियो। हाल लिटरमा १३.१७ प्रतिशत अर्थात् ६.५२ रुपैयाँले वृद्धि भएको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए। उपभोक्ताका लागि प्रशोधित […]
काठमाडौं, ५ माघ : नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारबाट चर्को घाटा बेहोरेको निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओस)लाई इन्धन खरिदबापतको रकम अपुग भएपछि डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको मूल्यवृद्धि गरेको हो । निगमले आजराति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी डिजले, मट्टितेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर तीन रुपैयाँ तथा आन्तरिकतर्फको […]